Xildhibaan Soo Dhoweeyay Dadaallada Xukuumadda Ee Ku Wajahan Galmudug – Bandhiga
Xildhibaan Soo Dhoweeyay Dadaallada Xukuumadda Ee Ku Wajahan Galmudug
Xildhibaanada Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanada Galmudug ayaa bogaadiyay howlaha baaxadda leh ee Wafdiga Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya ay ka wadaan Galmudug.
Xildhibaan Cabdixakiim Macalin Axmed oo ka mid ah Mudanayaasha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Dhuusa-mareeb ayaa soo dhoweeyay dadaalada Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre iyo wafdigiisa ay ka wadaan Galmudug ee ku aadan sidii dib la isugu keeni lahaa Shacabka Galmudug looguna dhisi lahaa maamul mideysan oo loo wada dhan yahay.
“Waxaan rabaa ugu horeyn inaan halkan uga mahad celino Ra’iisal wasaaraha Xukuumadada Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre oo runtii mudo aad u dheer ka shaqeynayay sidii Galmudug dib la isugu keeni lahaa,sidii shaqadii Galmudug,Dowladnimadii,maamul iyo Ciidankii Galmudug loo hagaajin lahaa,aadbaa runtii dowrkaasi u taageereynaa,waxaan hubaa runtii in shacabka Galmudug ee aan soo aragnay iney ku faraxsan yihiin dadaalkaasi socda,” ayuu yiri Xildhibaan Cabdixakiim Macalin Axmed.
Sidoo kale Xildhibaanka ayaa u mahad celiyay,madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf,Madaxa Xukuumadda Sheikh Shaakir iyo dhammaan madaxda Galmudug sida ay ugu dhabar adeygeen iney mideeyaan shacabka Galmudug una soo dhoweeyeen Wafdi Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya ee ku sugan Galmudug.
Xildhibaan C/llaahi Gaafow Maxamuud oo ka tirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka iyo Senator Jawaahir Axmed Cilmi ayaa si isku mid ah usoo dhoweeyay dadaalada Ra’iisal wasaare Kheyre uu ka wado deegaanada Galmudug.
Waxayna ugu baaqeen Xildhibaanada ka soo jeeda Galmudug iney ka qeyb qaataan dadaalada la doonayo in Galmudug cusub dib loogu yagleelo.